China Cable Phosphatized Steel Wire ho an'ny Optical Fiber Cable Reinforcement orinasa sy mpamatsy | TONTOLO IZAO
Tady vy phosphatized ho an'ny fanamafisana ny tariby fibre optika
Fepetra fandoavana T / T, L / C, D / P, sns.
Ora nanomezana 20 andro
Seranan-tsambo Shanghai, Sina
Fandefasana Amin'ny ranomasina
Kaody HS 7229909000
Fonosana Carton na boaty hazo, 50kg / fonosana na arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa
Ny tariby vy phosphatized ho an'ny tariby fibre optika dia vita amin'ny tsorakazo tariby vy faran'izay avo lenta amin'ny alàlan'ny andian-dahatsoratra toa ny fanaovana sary masiaka, ny fitsaboana hafanana, ny fanangonana, ny fanasana, ny fosfatsaina, ny fanamainana, ny fanaovana sary ary ny fandraisana azy, sns.
Ny tariby vy phosphorized dia iray amin'ireo singa fototra ampiasaina amin'ny tariby optika fifandraisana. Izy io dia afaka miaro ny fibre optika amin'ny famoritana, ny fanohanana ary ny fanamafisana ny taolana, izay mahasoa amin'ny fanamboarana, fitahirizana ary fitaterana tariby optique ary ny fametrahana ny tariby tariby optika, ary manana kalitaon'ny tariby optika tsy miovaova, mampihena ny atenuation famantarana sy ireo toetra hafa.
Ny tariby vy nampiasaina tao anatin'ny fototry ny tariby optique dia nanolo ny tariby vy nandrisika tamin'ny lasa tamin'ny alàlan'ny tariby vy vita amin'ny phosphatized, ary misy fiantraikany mivantana amin'ny ain'ny tariby optika ny kalitaony. Ny fampiasana tariby vy phosphatized dia tsy hihetsika ara-simika amin'ny menaka ao amin'ny tariby optika hametahana ny hidrôzenina ary hiteraka fatiantoka hidrôzenina, izay afaka miantoka ny fifandraisana amin'ny fibre optika avo lenta.
Ny tariby vy phosphatized ho an'ny tariby optika omenay dia manana ireto toetra manaraka ireto:
1) Milamina sy madio ny faritra, tsy misy kilema toy ny triatra, alazo, tsilo, harafesina, miondrika sy maratra sns
2) Ny sarimihetsika phosphating dia mitovy, mitohy, mamiratra ary tsy milatsaka;
3) Ny fisehoana dia boribory miaraka amin'ny habeny miorina, tanjaka avo lenta, modulus elastika lehibe, ary elongation ambany.
Izy io dia ampiasaina ho toy ny fanamafisana metaly afovoan'ny tariby optika fifandraisana ivelany.
Savaivony nominal (mm)
Min. faharetana amin'ny sintona (N/ mm2)
Min. lanjan'ilay sarimihetsika phosphating (g/ m2)
Modulus elastika (N / mm2)
Elongation sisa (%)
≥1.90 × 105
Fanamarihana: Ho fanampin'ny pitsopitsony ao amin'ny latabatra etsy ambony, dia afaka manome tariby vy phosphatized miaraka amin'ny famaritana hafa sy tanjaka hafanana hafa arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
1) Tokony hotehirizina ao anaty trano fanatobiana madio, misy rivotra ary maina izy io;
2) Ny sosona ambany amin'ny tranokala fitehirizana vokatra dia tokony asiana fitaovana tsy misy hamandoana mba hisorohana ny harafesina;
3) Tokony harovana amin'ny tsindry mavesatra, kapoka ary fahasimbana mekanika hafa mandritra ny fitehirizana sy ny fitaterana.
Teo aloha: Galvanized Steel Wire ho an'ny Stranding Cable
Manaraka: Tape vita amin'ny fibre polyester
F1: Afaka mitsidika ny orinasanao ve izahay?
A: manantena ny fahatongavanao izahay ary hitarika anao hitsidika ny fivarotanay.
F2: Ahoana no hahavitako haingana ny teny nalaina?
A: Matetika izahay mitanisa mandritra ny 24 ora ny fitaovana tariby mahazatra aorian'ny fanontanianao. Raha maika ny hahazo ny vidiny ianao, azafady miantso anay na lazao aminay amin'ny mailakao fa hoheverinay ho laharam-pahamehana ny fanontanianao.
F3: Inona ny teny fonosanao?
A: amponga hazo, pallet vita amin'ny plywood, boaty hazo, baoritra ho an'ny safidy, miankina amin'ny fitaovana samihafa na ny zavatra takian'ny mpanjifa.
F4: Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
A: T / T, L / C, D / P, sns. Hasehonay anao ny sarin'ny vokatra sy ny fonosana alohan'ny andoavanao ny mizana.
F5: Inona ny fe-potoana alefanao?
A: EXW, FOB, CFR, CIF. Azonao atao ny misafidy ny iray izay mety indrindra aminao na mahomby indrindra aminao.
F6: Ahoana ny amin'ny ora fandefasana anao?
A: Amin'ny ankapobeny dia maharitra 7 ka hatramin'ny 15 andro aorian'ny fahazoana ny vola aloanao mialoha. Ny fotoana fandefasana manokana dia miankina amin'ny entana sy ny haben'ny baikonao.
F7: Inona ny politikanao santionany?
A: Misy ny santionany ho an'ny fitsapana anao, azafady mifandraisa amin'ny varotra anay hampihatra ny santionany maimaimpoana.
F8: Ahoana no anaovanao ny orinasanay maharitra sy fifandraisana tsara?
A: 1. mitazona ny kalitao sy ny vidin'ny fifaninanana izahay hahazoana antoka fa hahazo tombony amin'ny mpanjifanay.
2. Manaja ny mpanjifa rehetra amin'ny maha sakaizanay izahay ary manao raharaham-barotra amin-kitsimpo ary manao namana amin'izy ireo, na avy aiza na avy aiza.
F9: Moa ve manome ny tariby tariby rehetra mifanaraka amin'ny tariby vokarinay?
A: Ie, vitantsika izany. Manana teknisiana momba ny teknolojia famokarana izahay izay mandray anjara amin'ny famakafakana ny firafitry ny tariby mba hitanisa ireo fitaovana ilainao rehetra.
F10: Inona avy ireo fitsipiky ny orinasao?
A: Fampitaovana fampitaovana. Manampy ny mpanjifa hisafidy ireo akora mety indrindra, hitsitsy vola ary hanatsara ny kalitaony.
Tombom-barotra madinidinika nefa mitodika haingana: Manampy ny tariby mpanjifa lasa mifaninana kokoa amin'ny tsena ary mivoatra haingana.
Wofy vy mifangaro
Wofy vy mifangaro ho an'ny tariby optika
Wofy vy mifangaro ho an'ny fanamafisana ny tariby optika
Wire vy phosphatized
Hot milentika nandrisika Steel Wire ho an'ny Cable Armoring
Kofehy aramid ho an'ny tariby sy tariby, fonosana tariby fibre optika
Tora-by Plastika nohamafisina (FRP) ho an'ny tariby fibre optika